China Steel Prop orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Ny prop vy dia fitaovana fanohanana ampiasaina betsaka hanohanana ny firafitry ny fitarihana mitsangana, izay mifanaraka amin'ny fanohanana mitsangana amin'ny endrika slab amin'ny endriny rehetra.Izy io dia tsotra sy malefaka, ary ny fametrahana dia mety, ara-toekarena ary azo ampiharina.Ny prop vy maka toerana kely ary mora ny mitahiry sy ny fitaterana.
Ny prop vy dia fitaovana fanohanana ampiasaina betsaka amin'ny fanohanana ny firafitry ny fitarihana mitsangana, izay mampifanaraka ny fanohanana mitsangana amin'ny endrika slab amin'ny endriny rehetra. maka toerana kely ary mora hitahirizana sy hitaterana.
Ny prop vy dia azo amboarina ao anatin'ny faritra voafaritra ary azo amboarina araka izay ilaina.
Misy karazany telo ny fitaovana vy:
1. Tube ivelanyφ60, Tube anatinyφ48(60/48)
2. Tube ivelanyφ75, Tube anatinyφ60(75/60)
Ny prop vy tany am-boalohany no fitaovana azo amboarina voalohany eto amin'izao tontolo izao, nanova ny fanorenana.Izy io dia endrika tsotra sy manavao, novokarina avy amin'ny vy avo lenta amin'ny fanondroana ny prop vy, mamela ny fahaiza-manao amin'ny fampiasana maro, anisan'izany ny fanohanan'ny asa diso, toy ny morontsiraka, ary ho fanohanana vonjimaika.Ny fitaovana vy dia haingana atsangana amin'ny dingana tsotra telo ary azo karakarain'ny olona tokana, miantoka ny fampiasana formwork sy scaffolding azo antoka sy ara-toekarena.
Ny singa vy prop:
1. Loha sy takelaka fototra ho fiarovana amin'ny hazo na hanamora ny fampiasana kojakoja.
2. Ny savaivony fantsona anatiny dia ahafahan'ny scaffold tubes sy couplers ampiasaina amin'ny tanjona bracing.
3. Ny fantsona ivelany dia mametraka ny fizarana kofehy sy ny slot ho an'ny fanitsiana ny haavony.Ny coupler de reduction dia ahafahan'ny fantsona scaffold manara-penitra mifandray amin'ny fantsom-baravaran'ny vy ho an'ny tanjona fampitaovana.
4. Ny kofehy eo amin'ny fantsona ivelany dia manome fanitsiana tsara ao anatin'ny elanelana nomena.Ny kofehy nanakodia dia mitazona ny hatevin'ny rindrin'ny fantsona ary noho izany dia mitazona hery ambony indrindra.
5. Ny nut prop dia ny fanerena vy manadio tena izay misy lavaka amin'ny tendrony iray ho mora mihodina rehefa manakaiky ny rindrina ny tahony.Azo asiana voanjo fanampiny hanovana ilay prop ho strut push-pull.
1. Ny fantsona vy avo lenta dia miantoka ny fahaiza-manaony.
2. Misy fanamboarana isan-karazany, toy ny: galvanization mafana, galvanization elektrika, fanosotra vovoka ary hosodoko.
3. Ny famolavolana manokana dia manakana ny mpandraharaha tsy handratra ny tanany eo anelanelan'ny fantsona anatiny sy ivelany.
4. Ny fantsona anatiny, ny tsimatra ary ny voanjo azo amboarina dia natao voaaro amin'ny fisarahana tsy nahy.
5. Miaraka amin'ny habe mitovy amin'ny takelaka sy ny takelaka fototra, dia mora ampidirina ao amin'ny fantsona anatiny sy ivelany ny lohan'ny prop (head fork).
6. Ny pallets matanjaka dia miantoka ny fitaterana mora sy azo antoka.
teo aloha: Fanamboarana simenitra fampiroboroboana ny orinasa - 65 Frame vy - Lianggong
Manaraka: Plastic Slab Formwork